Ciyaaraha ugu badbaadada badan Android | Androidsis
Waxaan horeyba ugu aragnay Androidsis dhowr xul oo nooca ah "kulamada ugu fiican ee ..." ama "codsiyada ugu fiican ee ...", maantana waxaa la joogaa mid ka mid ah mowduucyada ugu xiisaha badan ee bixiya ciyaar dheeri ah, marna ka wanaagsan: ciyaaraha badbaadada.
Runtu waxay tahay inta badan cayaaraha waxaa jira qayb kuu oggolaanaysa inaad ku noolaato (sii wadato) ama aad dhimato (lumiso ciyaarta); nolosha tan tirisa ayaa daliil fiican u ah. Si kastaba ha noqotee, markaan ka hadlayno ciyaaraha badbaadada waxaan ula jeednaa ciyaaraha ay ficil ahaanshaha nolosha ku nool yihiin qaybta ugu muhiimsan Qorshaha. Haddii ay yihiin kuwa ugu fiican ama aan ahayn, waa wax aad adigu kaliya go'aansan karto, laakiin waxa iska cad ayaa ah in mawduucani runtii leeyahay cinwaanno wanaagsan sidaa darteed, aan aragno qaar ka mid ah waxa noqon kara kulamada badbaadada ee ugu wanaagsan Android.
2 Minecraft: Jeebka jeebka
3 World kale
4 Taxanaha Ciyaarta Nolosha
5 Out Waxaa: Ω Edition
6 Ku darso…
Waxaan horeyba kuugu sheegay kulankaan munaasabad kale, markalena waxay umuuqataa mid kamid ah kulamada badbaadada ee ugu wanaagsan Android. jirey markii ugu horreysay ee la soo saaray sanadkii 2015-kii isla markaana goor dhow noqotay ciyaar aad loo jecelyahay taas oo waxaad qaadan doontaa aqoonsiga ilmo ay tahay inuu raadsado walaashiis oo ku meeraysata Limbo. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa inaad xalliso xujooyinka, ka adkaato wuxuushyada argagaxa ah oo aad u aaddo dhammaadka jidka si aad u badbaadiso iyada. Waxaad u badan tahay inaad dhimato dhowr jeer bilowga, laakiin ku celcelintu waxay kaa dhigeysaa inaad badbaado.
Minecraft: Jeebka jeebka
Minecraft: Jeebka jeebka waa ciyaar kale oo badbaado ah, iyo mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Xaqiiqdii waxay leedahay qaabka ciyaarta "Habka Badbaadada" (Habka Badbaadada).
Baadh adduunyo si aan kala sooc lahayn loo soo saaray oo dhis waxyaabo yaab leh, laga bilaabo guri fudud ilaa qalcad qaali ah. Ku ciyaar qaab hal abuur leh ilo aan xadidnayn ama adduunka ku qarxiya hab weyn oo leh habka badbaadada, farsamaynta hubka iyo hubka si looga takhaluso xayawaannada halista ah.
World kale waa a ciyaar biimayn Waa midka aad qaadanayso aqoonsiga fiisikis kaas oo, si shil ah, ugu dambeeya xaqiiqo kale. Ujeedadaadu maahan mid kale oo aan ka aheyn inaad ka badbaado halxiraalaha iyo weerarada isdaba jooga ah ee ragga iyo xoolaha sharta ah adoo qorsheynaya qorshe baxsi
Sida cajiib ah World kale waxaa "markii hore loo sameeyay Amiga 1991, ka dibna loo dhoofin jiray dhuftoyo badan sanadihii la soo dhaafay."
Taxanaha Ciyaarta Nolosha
Xaaladdan oo kale waxaan u tixraaceynaa taxane dhan oo badbaado ah oo loo yaqaan 'Lifeline'. Ciyaar kasta waxaad u baahan doontaa inaad caawiso qof kale oo aad kula xiriiri karto oo keliya adoo adeegsanaya wax sida raadiyaha oo kale ah. Ujeeddada ayaa ah in laga caawiyo inay gaaraan go'aannada saxda ah oo ay sidaas ku noolaadaan muddo ku filan oo ay ku arkaan dhamaadka ciyaarta.
Cinwaannada oo dhami waxay leeyihiin gameplay aad u fudud, sidaa darteed waxay si fiican ugu shaqeeyaan Android Wear sidoo kale, iyagu waa qaali mana ku jiraan xayeysiis ama wax ku iibsiga barnaamijka.
Waxaad heli kartaa aruurinta dhammeystiran ee ciyaaraha Nolosha Halkan.
Out Waxaa: Ω Edition
En Out Waxaa waxaad noqon doontaa cirbixiyeen yaa soo baraarugay sanado kadib markii uu qayliyay oo hadana waxaad isku aragtaa dhexda meel banaan oo aan lagaranayn, "halkaas ... meel fog oo aan lagaranayn oo ku dhexjirta galka", kaligaa, aadna ugu baahan sahay. Ujeeddadaadu waxay noqon doontaa hagaajinta markabka, helitaanka ilaha iyo badbaadada.
Boosku waa meel cadow ku ah: riwaayadaha halista ah iyo kuwa dahsoon waxay calaamadeyn doonaan heer kasta oo safarkaaga ah. Kaliya maheli doontid inaad heshid noocyo caqli badan oo aadan haba yaraatee dan ka yeelan doonin, laakiin sidoo kale waxaad isku arki doontaa quwado hore oo ku xidhan masiirkaaga iyo masiirka aadamiga laftiisa. Badbaadinta iyo fahamka waxa run ahaantii qatar kujira galaxyada ayaa udub dhexaad u ah waxa Jira Halkaas inay bixiso.
Waa ciyaar aad u ballaadhan oo horumarisa iyada oo ku saleysan waxa aad sameyso ("Baadh galax leh habab cusub oo la soo saaray ciyaar kasta"), markaa way kugu adkaan doontaa inaad ku noolaato laba khibradood oo isku mid ah. Ciyaartan sidoo kale malahan wax iibsasho gudaha ah.
Developer: Istuudiyaha My-Clos
Developer: Riyooyin aan dhamaad lahayn
Faafida: Ciyaarta Gudiga
Crashlands: Farsamaynta sheeko-wadista ARPG
Ha Gaajoon: Buugga jeebka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha badbaadada ugu fiican ee Android
Samsung, marka waxyeelada sawirku aysan saameyn ku yeelan faa'iidooyinka